Nezvedu - China SNS Pneumatic Co, Ltd.
China SNSPneumatic yakavambwa mu1999 iyo ikozvino yave iri inotungamira yekutengesa yezvinhu zvepneumatic zvikamu muChina. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye30000 ㎡, iine mashanu ekugadzira mabhesheni uye anopfuura makumi maviri emakambani anobatsira ane vashandi vanopfuura 1000.SNS yapfuura ISO9001 uye 2000 Quality Management System Certification nekuda kwebasa rayo rakanaka uye nemhando yepamusoro. Parizvino pane vanopfuura mazana maviri vamiririri nevashambadzi pasi rese uye isu tiri kutarisira kusvika kumusika wepasi rese.
Zvigadzirwa zvikuru zveSNS kusangana kwemhepo, masirinda, mavhavha, zvigadzirwa, hydraulic zvinoriumba, Kunze kwekunze, hunhu hunosimbisa uye mutengo unodhura ndizvo zvatino tevera. Zvigadzirwa zvedu zvinotengesa mushe muChina zvese uye mumusika wepasi rose weSoutheast Asia, Nyika dzeEuropean neAmerica, Middle East, nezvimwewo SNS yawana matirastii evatengi uye mukurumbira wakanaka.
Kuomerera pakutendeseka kune vatengi, kubatsirana kumusika, hunyanzvi uye kupfuura pachayo, SNS ichawana ramangwana nemhando yepamusoro.